စောချစ်သူ: January 2012
၁၊၊ဘလော့အသစ်တစ်ခုစဖွင့်မယ်Create new blogဒါကြတော့နမူနာပေါ့နော်၊
၂၊၊ဖွင့်လိုက်သည့်ဘလော့အသစ်မှာမိမိသုံးမည့် templateကိုUpload လုပ်လိုက်မယ်၊
<div id='sidebar'> အပေါ်ကCodeနဲ့အတူတူပါဘဲ၊ တွေ့ပြီဆိုရင်အခုဏCopyလုပ်ထားတဲ့
Widget Codeတွေကိုအာက်မှာpasteပြန်လုပ်ပေးလိုက်ရင် မိမိဘလော့အဟောင်းက အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပါပြီးပါပြီ။။။
Source : Kp-3နည်းပညာ
Posted by minchitthu at 11:180comments
Posted by minchitthu at 08:51 1 comments
Posted by minchitthu at 08:370comments
Posted by minchitthu at 08:270comments
Posted by minchitthu at 00:270comments
Posted by minchitthu at 20:560comments
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ အားလုံးအတွက် ကွန်ပျူတာကို လေ့လာနေသူတိုင်းအတွက် သိသင့်တဲ့ အခြေခံ အချက်လေးတွေကို ရေးပေးသွားပါမယ် .. ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာ လေးတွေကို ရေးပေးသင့်တာ ကြာပါပြီ .. စာရေးရတာ အာရုံမလာတာနဲ့ မရေးဖြစ်တော့တာပါ .. ကျွန်တော် ရေးမယ်ဆိုပြီး အကြောင်းအရာ တွေစုထားလိုက် မရေးဖြစ်လိုက်နဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော် စာများများ ပြန်ရေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ် .. စာရေးတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်တော် အဓိကထားပြီး ရေးချင်တဲ့ ပုံစံလေးကို အရင်ပြောပြ ပေးပါမယ် ..
Posted by minchitthu at 14:500comments
မိမိကွန်ပျူတာ System အလိုက် Download ချပါ။မကြည့်တတ်လျှင်ဒီမှာသွားလိုက်ပါ။
Posted by minchitthu at 14:380comments
ကွန်ပျူတာစတင်သင်ကြားသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လက်ကွက်လေ့ကျင့်ရန်ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။(၂)ပိုင်းစလုံးကို Download ချပြီးလျှင် အပိုင်း(၁)တစ်ခုကိုပဲ WinRar ဖြင့်ဖြည်လိုက်ပါ။ရရှိလာသောဖိုင်အသစ်ကို install လုပ်လိုက်လျှင်ရပါပြီ။
ဖိုင်ဖြည်နည်းကတော့အပိုင်း(၁)ကို Rightclick ထောက်ပြီး Extractfiles... ကလစ်လိုက်ပါ။ပြီးလျှင် Keep broken files ကို အမှန် ခြစ်ပြီး Ok နှိ်ပ်လိုက်ရုံပဲ။
Posted by minchitthu at 14:060comments
install လုပ်လိုက်ပါ. Settings ထဲကိုသွားပြီး General settings ကိုရွေးလိုက်ပါ. ညာဖက်အခြမ်းမှာ Name ..... , Key ........ ဆိုပြီးတော့ တွေ့ပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော် အခုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အထဲက ကြိုက်တဲ့ တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ activate လုပ်လိုက်ပါ လုပ်ပြီးရင်တော့ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ auto update ဆိုတာတွေကို ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ခဏရပ်ထားပြီးတော့ ဘာ program မှ မဖွင့်ပါနဲ့. C:/ ကို အရင်ဦးဆုံး စပြီးစစ်ပါ. virus ကိုပဲ ဖယ်ရှားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ် program ဘယ်ဖိုင်ကိုမှ မထိခိုက်ပါဘူး. အဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချသာစစ်ပါ. My computer ကိုဖွင့် C:/ ကို ညာဖက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့ Scan with Smadav ဆိုတဲ့ icon လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ သူ့ဟာသူ စစ်နေပါလိမ့်မယ်. တစ်ချို့ virus တွေဆိုရင် delete လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့အခါကျရင်တော့ delete ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. တစ်ချို့ virus တွေကို Quarantine ထဲကို ပို့လိုက်ပါလိမ့်မယ်. အဲ့ virus မျိုးကျရင်တော့ အမှန်ခြစ်ပေးပြီးတော့ delete သာ လုပ်လိုက်ပါ.
Download ifile.it | Mediafire | Download mirrorcreator
အပေါ်က ပါလာတဲ့ ကီးနဲ့ မလုံလောက်ရင် အောက်မှာ ထပ်ပြီးတော့ ကီးတွေ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
ifile.it | Mediafire
Posted by minchitthu at 04:370comments
အခုကျွန်တော် ဓာတ်ပုံအလွယ်တကူ ပြုပြင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Photo Makeup Editor လေးတင်ပေးလိုက် ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘာအတွက် အသုံးပြုနိုင်လည်း ဆိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက် အလှပြင်ယူလို့ ရတဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အပြင်မှာ မိတ်ကပ်လိမ်း သလိုပဲပေါ့ဗျာ .. အသုံးပြုရတာ လွယ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးနဲ့ အသုံးပြု လို့ရအောင် Serials Key လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်လို့ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Posted by minchitthu at 21:030comments
Posted by minchitthu at 17:590comments
Posted by minchitthu at 17:410comments
Posted by minchitthu at 12:040comments
1.အ၇င်ဆုံး Avast Antivirus လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Maintenance ကိုသွားပါ။ Registration ကိုထပ်
2.Registration ကိုေ၇ာက်ပြီဆို၇င် Offline Registration ၇ဲ့အောက်မှာ Registration Form နဲ့ Insert the
license key ကိုတွေ့ ၇ပါလိမ့်မယ်။ Insert the license key ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
3.ပြီး၇င်ကျလာတဲ့ Box လေးထဲမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ Key file ထဲက Key တစ်ခုကိုယူပြီးထည့်ပေး
လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Active ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆို၇င်ကျွန်တော်တို့ Avast AntiVirus 5.0.5 ကို Registration
Posted by minchitthu at 11:550comments
Posted by minchitthu at 10:420comments
Posted by minchitthu at 10:270comments